Yakobo 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yakobo Nhoma No 3:1-18
Sɛnea yebedi tɛkrɛma no so (1-12)
Ɛnyɛ mo nyinaa na ɛsɛ sɛ moyɛ akyerɛkyerɛfo (1)
Nyansa a efi soro no (13-18)
3 Me nuanom, ɛnyɛ mo nyinaa na ɛsɛ sɛ moyɛ akyerɛkyerɛfo, efisɛ sɛnea munim no, yɛn paa na yebenya atemmu a emu yɛ duru.*+ 2 Ɛne sɛ, yɛn nyinaa di mfomso* mpɛn pii.+ Sɛ obi nni mfomso wɔ kasa mu a, ɛkyerɛ sɛ saa onipa no, bɔne nni ne ho,* na otumi hyɛ ne nipadua nyinaa so.* 3 Sɛ yɛde nnareka hyɛ ɔpɔnkɔ anom ma otie yɛn a, yetumi ma aboa no yɛ nea yɛpɛ. 4 Hwɛ, ɛpo so hyɛn nso ɛwom sɛ ɛso, na mframa dennen na etumi twe no de, nanso akyerɛkyerɛkwan ketewaa bi na ɛdannan no kɔ baabi a ɔhyɛnkafo no pɛ. 5 Saa ara na tɛkrɛma nso te; ɛyɛ kwaa ketewa wɔ nipadua no mu, nanso etumi hoahoa ne ho paa. Hwɛ sɛnea ogya ketewaa tumi hyew kwae kɛse! 6 Tɛkrɛma nso yɛ ogya.+ Tɛkrɛma yɛ nipadua kwaa a amumɔyɛ ahyɛ no ma; etumi gu nipadua no nyinaa ho fĩ+ na ɛsɛe nnipa abrabɔ; ɛsɛe ade te sɛ Gehenna.* 7 Nkekaboa ne nnomaa ne mmoa a wɔwea ne mmoa a wɔwɔ po mu nyinaa, nnipa tumi yɛ ara* ma wotie wɔn, na wɔatie nnipa fi tete. 8 Nanso tɛkrɛma de, ɔdasani biara ntumi nni so. Ne ho yɛ ahometew; wuntumi nka no nhyɛ, na edi awu.+ 9 Ɛno na yɛde yi Agya Yehowa* ayɛ, na ɛno ara nso na yɛde dome nnipa a wɔayɛ wɔn wɔ “Onyankopɔn suban so”+ no. 10 Ano koro no ara mu na nhyira ne nnome fi ba. Me nuanom, ɛnyɛ papa sɛ eyi bɛkɔ so saa.+ 11 Asuti baako betumi apuw nsu dɛdɛ ne nsu nwenenwene afi faako anaa? 12 Me nuanom, borɔdɔma dua betumi asow ngodua aba? Na bobe nso betumi asow borɔdɔma?+ Saa ara nso na yɛrentumi nnya nsu dɛdɛ mfi nsu nkyenenkyene mu. 13 Mo mu hena na ɔyɛ onyansafo na ɔwɔ ntease? Ma ɔmfa ɔbra pa ne odwo a efi nyansam nna ne nnwuma adi. 14 Nanso sɛ mowɔ ahoɔyaw+ ne mansotwe*+ wɔ mo komam a, monhwɛ na moanhoahoa mo ho+ amfa ankyerɛ sɛ munni nokware. 15 Eyi nyɛ nyansa a efi soro, na mmom ɛyɛ asaase so de,+ honam de, ne ahonhommɔne de. 16 Na baabiara a ahoɔyaw ne mansotwe* wɔ no, basabasa ne akyiwade biara bi nso wɔ hɔ.+ 17 Na nyansa a efi soro no de, nea edi kan, ɛho tew,+ ɛpɛ asomdwoe,+ ɛte asɛm ase,+ ɛyɛ asoɔmmerɛw; mmɔborɔhunu ne aba pa ayɛ no ma,+ ɛnyɛ nyiyim,+ na ɛnyɛ nyaatwom.+ 18 Bio nso, wodua trenee aba wɔ asomdwoe mu+ ma wɔn a wɔyɛ nneɛma a ɛde asomdwoe ba.+
^ Anaa “den.”
^ Nt., “hintiw anaa yɛhwe ase.”
^ Anaa “owie pɛyɛ.”
^ Anaa “to ne nipadua nyinaa nnareka.”
^ Anaa “dwudwo wɔn.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “na mopere dibea.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “dibea a wɔpere.”